जनताका गोप्य कुरा सुन्ने गरी ‘फोन ट्यापिङ’ गराउन सांसद नै सहमति !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : बिहिबार, फाल्गुन १५, २०७६
काठमाडौं – व्यक्तिगत ‘फोन ट्यापिङ’ गरेर गोप्य कुराकानी सुन्ने कानून बनाउने प्रावधानमा सहमति जुटेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधवार व्यक्तिगत फोन ट्यापिङको विवादित प्रावधान नहटाउने पक्षमा सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ ।
नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विधायन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । विधेयक दर्ता भएसँगै नेपाल विशेष सेवा विधेयक विवादित बनेको थियो ।
दफा १० को सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका प्रावधानमा केही शब्द हेरफेरसहित सहमति जुटेको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए । ‘धेरै देशमा फोन ट्यापिङको व्यवस्था छ । व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राख्ने गरी यो प्रावधान अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ गुरुङले भने । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
फोन ट्यापिङको प्रावधान दफा १० मै राखिएको छ । ‘फोन ट्यापिङ’को विषय नयाँ भएका कारण गलत सन्देश गएजस्तो देखिन्छ । तर यो साधारण हो, यहाँ सबै कुरा व्यवस्थित तरिकाबाट हुन्छ,’ सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, ‘केही शब्द हेरफेर गरी यो प्रावधान राख्ने सहमति जुटेको छ ।’
दफा १० को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने छ ।’
विवादित दफा १० मा दुई ठाउँमा नयाँ शब्द राखिएको छ । समितिको दफादार छलफलमा ‘विभाग’ भन्ने शब्दको ठाउँमा ‘अनुसन्धान अधिकृत’ राख्ने सहमति भएको पुरीले बताए । यही दफाको उपदफा ४ र ५ लाई छुट्याएर छुट्टै दफा बनाउने सहमति भएको छ ।
‘गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि संकलन गरेका सूचना सार्वजनिक भए जिम्मेवार व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने’ भन्ने शब्द राखिने भएको छ । प्रतिपक्षी सांसदले भने फोन ट्यापिङका विषयमा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिसँग अनुमति लिनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् ।
कांग्रेस, राजपा र समाजवादीका सांसदले समितिको अडान यथावत् रहेको कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले बताए ।
‘हामीले अडान छाडेका छैनौं । फोन ट्यापिङ गर्दा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न हामीले प्रस्ताव गरेका छौं,’ सांसद पन्थले भने, ‘विधेयक पास गर्दा हामी पुनः यो प्रस्ताव गर्छौं ।’
सीमामा अलपत्र १५ सय नेपाली हारगुहार गर्दै, कम्युनिस्ट सरकार मस्त निद्रामा ?
भीम रावलले ओली सरकारलाई भने – सीमामा अलपत्र नेपालीबारे कुरा गर
केपी ओलीले ईश्वर पोखरेललाई सोधे – भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यो विषय कसरी उठ्यो ?
ओली–प्रचण्डका नजिकी दूर्गा प्रसाइँको अस्पतालमा बिरामी बालकमाथि अमानवीय अत्याचार !
राज्यको ढुकुटीमा कम्युनिस्ट सरकारको लुट : ३६० को वस्तु २१६० मा खरिद, करोडौं अनियमितता
सीमामा अलपत्र नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी उद्धार गर्नुपर्छ : नेता डा. महत
कांग्रेस नेता गोपालमानको सुझाव : सरकारले नेपालीको तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ